बहुधार्मिक मुलक कसरी धर्मनिरपेक्ष
Tuesday, 08.04.2015, 04:41pm
काठमाडौं । नयाँ नेपाल बनाउने मुलकको नयाँ संविधानको मस्यौदामा धर्मका विषयमा लेखिएको वाक्यांश उदेकलाग्दो छ । नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहु सांस्कृतिक मुलुक हुनेछ भनेर एकातिर भनिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनेछ पनि भनिएको छ ।
सिमाङ्कनमाथि अरु दवाव बढ्दो
Tuesday, 08.04.2015, 04:39pm
काठमाडौं । संविधानमा जनताको सुझाव अनुसार परिमार्जन गर्न दलहरु किन सहमत भैरहेका छैनन् यो एउटा अहम् प्रश्न बनेको छ । भन्नेबेलामा जनताको संविधान बनाउने भन्ने तर, जनताले दिएको सुझाव नमान्ने नेताहरुले नेपालमा जनताको परिभाषा नै बदल्न खोजेका छन् ।
पहिलोपटक ग्यासको मूल्य घटयो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पहिलोपटक खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको छ । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुुसार मूल्य समायोजन गर्ने नीति अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको छ ।
देश विदेशीको हातमा जाने खतरा छ
Tuesday, 07.28.2015, 12:22pm
भक्तपुर । नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकताका विषलाई लिएर गरिएको प्रावधानले मस्यौदामै देश विदेशीको हातमा जाने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बागीश्वरी कलेज भक्तपुरले हालै आयोजना गरेको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
बिपी सङ्ग्रहालयको पुनःनिर्माण सुरु
Tuesday, 07.28.2015, 12:21pm
काठमाडौं । भूकम्पले बिपी सङ्ग्रहालय पूर्णरुपमा ध्वस्त भएपछि ३३ औँ स्मृति दिवसको अवसर पारेर बिहिबार पुनःनिर्माण सुरु गरिएको छ । वैशाख १२ को भूकम्पले सङ्ग्रह गरिएका चीजबीज राख्ने स्थान नभएपछि बहुमूल्य चीजबीज सुरक्षित स्थानमा राखेर पुनःनिर्माण सुरु गरिएको बिपी सङ्ग्रहालय समितिका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यथास्थितिको मस्यौदा नै संविधान बने दुर्घटना
Tuesday, 07.21.2015, 02:37pm
काठमाडौं । संविधानको मस्यौदामा जनताको रायसुझाव लिने काम भैरहेको छ र आज त्यो काम सकिन्छ । तर, जनताबाट प्राप्त सुझावहरू संविधानमा समेटिन्छन् र संविधान संविधानकै रुपमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
राणाकालीन कानुन संशोध गरेर चलिरहेको छ
Tuesday, 07.14.2015, 03:37pm
नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुलुकको न्याय प्रशासन अहिलेको पनि राणाकालीन न्यायमा केही संशोधन गरेर चलिरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो गुनासो गर्नुभएको हो ।
पुनःनिर्माण नेपालकै विशेषतामा अगाडि बढाउनुपर्ने
Tuesday, 07.14.2015, 03:36pm
काठमाडौं । नेपालमा गएका विनाशकारी भूकम्पपछि यहाँको पुनःनिर्माणमा सहयोगी हात बढाउन आएको जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)का विज्ञ तथा प्राविधिकले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई नेपालको आफ्नै विशेषतामा अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नै नभएकालाई निर्वाचन क्षेत्रको रकम ?
Tuesday, 07.14.2015, 03:35pm
काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक कालमा सांसदहरूलाई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि २०५ जना सांसदलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ दिने गरेको थियो । २०६५ पछि ६०१ जना सांसद भए । त्यसमा मुलुकमा २४० निर्वाचन क्षेत्रका र बाँकी समादुपातिक तथा मनोनित ।
ग्रेटर नेपालका लागि ज्ञापन पत्र
Tuesday, 07.07.2015, 01:55pm
काठमाडौं । नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी (बेलायत)बीच भएको सुगौली सन्धिको प्रावधान अनुसार बेलायतले भारत छोडेपछि सुगौली सन्धि पनि स्वतः खारेज भएको दावी अभियन्ताहरूको छ ।
करोडौंका सोलार बत्ती बिग्रिए
Tuesday, 07.07.2015, 01:51pm
सडक बत्ती मर्मतको लागि कुनै पहल नभएको तथा कतिपय बत्ती नबल्ने अवस्थामा रहेको भन्दै ती बत्तीको पनि तत्काल पुनःनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौं । वैशाख १२, १३ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि उपत्यकामा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालमा तीन करोड वर्षदेखि भूकम्प गैरहेछ
Tuesday, 06.30.2015, 12:30pm
काठमाडौं । भूकम्प सम्बन्धी विज्ञहरूले करीब तीन करोड वर्षदेखि नेपालमा विभिन्न समयमा भूकम्प गइरहेको र अझै पनि ठूला भूकम्प जानसक्ने भएकाले विज्ञले सुरक्षित रहन पूर्वतयारीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् ।
Tuesday, 06.30.2015, 12:29pm
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी उनीहरूको गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ ।
चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने गिरोह पूर्वतिर सर्याे
Tuesday, 06.23.2015, 12:10pm
काठमाडौं । नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका केही जिल्लाहरू चेलिबेटी बेचबिखनमा पर्नेमा अग्रणी मानिन्छ । यतिबेला यी जिल्लाहरूमा जनचेतना र सुरक्षाको प्रभावकारी बन्दोबस्तीले चेलिबेटी बेचबिखन गर्ने गिरोहहरू बसाई सर्न थालेका छन् ।
कूटनीतिक रुपमा नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत
Tuesday, 06.23.2015, 12:07pm
काठमाडौं । भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता सच्याउन नेपालले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा बुद्धिजीवीले जोड दिएका छन् । उनीहरूले सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक रुपमा पहल गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा पनि नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढकाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
गाउँगाउँमा सक्रिय छन् दलका कार्यकर्ता
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको भक्तपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा यतिबेला साना ठूला सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सरसफाई, भग्नावशेष हटाउने तथा अस्थायी आवास निर्माणमा सक्रिय भैरहेका छन् । जोखिमयुक्त घर भत्काउन, भग्नावशेष हटाउन र अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल र अन्य दल गाउँ गाउँमा पुगेका छन् ।
गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त दुईजनाको मृत्यु
Tuesday, 06.09.2015, 11:59am
जेठ महिना यसै पनि गर्मी हुने समय हो । तर केही दिनयता बढेको अत्यधिक गर्मीसँगै चलेको तातो हावाले मध्य तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । तराई मात्र किन, काठमाडौं उपत्यकामै तापक्रमले रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । गर्मीका कारण सोमबार सप्तरीमा दुईजनाको ज्यान गएको छ । सप्तरीमा पाँच दिनदेखि बढेको गर्मीका कारण सप्तरी जिल्लासहित तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ । एक्कासि बढेको प्रचण्ड गर्मीका कारण जनजीवन कष्ठकर बन्दै गएको हो । गर्मी बढेपछि सदरमुकाम राजविराजलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चहलपहलमा कमी आएको देखिन्छ ।
जस्तापाता विक्री प्रकरण : तीस दलीय मोर्चाको आपत्ति
Tuesday, 06.02.2015, 10:46am
“एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गरिने भनिएपनि सरकारका मन्त्रीहरू नै राहत वितरणमा राजनीतिकरण गरियो, आजको बैठकले सरकारलाई गैरकानुनी कार्य सच्याउन आग्रह गर्ने र नसच्यिए विरोध गर्ने निर्णय भएको छ”– प्रवक्ता सिंहले भन्नुभयो ।
असारभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ
काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही जेठ २१ गतेसम्मको अवधिलाई संविधान लेखनका लागि सहमति जुटाउने विषयमा पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
» अनियमितताको प्रश्न गर्ने पत्रकार कुटिए
» पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा नबस्न सुझाव
» एमाओवादीका डेढ लाख कार्यकर्ता परिचालित
» भूकम्पबाट बच्न सुरक्षित घर बनाऔं
» एमालेका दश हजारको टोली परिचालित
» ४२ लाख विद्यार्थी प्रभावित
» यो वर्खा धान्ला त त्रिपालले ?
» ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर मापदण्डविपरीत
» अभूतपूर्व एकता देखियो संसदमा नेताहरुको
» एमाले नेता ढकालको निधन
» नागरिकता सहज बनाउने कि सस्तो ?
» सिमा नाकामा एजेण्टकै भरमा भिसा दिइन्छ
» बलात्कार स्वाभाविक हो !
» मौसम सकिएपछि पहिलेको भन्दाा कम दरमा उखुको मूल्य निर्धारण
» पूर्व सम्झौता समेत उल्टाउने तयारीमा सरकार
» तामाकोशीमा सिमेन्ट भ्रष्टाचार
» नेपालको विकासमा हरसहयोग गर्न चीन तयार
» गुमेका भू–भाग फर्काउन अभियान
» कर्णेल लामालाई स्वदेश ल्याउ
» मेलम्ची नगरपालिकामै पानीको हाहाकार
Page 7/16: « :: ...4567 8910 ... :: »